Ungabhuka Kanjani? - Ukudla
Ngolunye usuku lwePhakheji Uhambo
I-Multi day Package Tour
Khetha usuku lokuhamba, izinketho (uma zikhona) kanye nenani labantu. Qhafaza ENGEZA EKALISHINI or INCWADI MANJE.
Chofoza QHUBEKA UTHENGE.
*asterisk futhi Imininingwane yomhlangano kumele igcwaliswe.
Chofoza Qhubekela ku-PayPal. * Kukhona imali ekhomishini ye-5% Paypal.
Bheka i-imeyili yakho ngevawusha.
Sebenzisa ivawusha yakho ngosuku olubekiwe.
Ngomusa ushiye imibono.
Khetha usuku lokuhamba, i-Pax nenani labantu.
I-EX) Uma abantu ababili bedinga ukubhukelwa, chofoza usuku lwakho lokuhamba bese uqhafaza 'Okwabantu be-2' ngenketho ye-PAX. Bese uchofoza u-'2 'wenketho Yomuntu Ngamunye.
Chofoza ENGEZA EKALISHINI or INCWADI MANJE.
- Sizokuthumela i-Draft Confirmation Voucher kungakapheli izinsuku zebhizinisi ze-3.
- Sizokuthumela kumaviki wokuqinisekisa we-Voucher 2 wama-Final ngaphambi kosuku lokuhamba.
Khetha usuku lokuhamba, Ibanga lehhotela, i-Pax kanye nenani labantu.
I-EX) Uma abantu ababili bedinga ukubhukelwa, chofoza usuku lwakho lokuhamba bese uqhafaza inketho yakho yeBanga Lehhotela. Bese uqhafaza 'Okwabantu be-2' kukhetho lwe-PAX. Ekugcineni, chofoza u-'2 'wenketho Yomuntu Ngamunye.
Khetha inketho yokukhokha: diphozitha nge-PayPal kanye nokulinganisela kwemali lapho ufika eKorea noma ukukhokhwa okugcwele nge-PayPal.
Chofoza Qhubeka ku-PayPal. * Kukhona imali ekhomishini ye-5% Paypal.
- Sizokuthumela i-Draft Confirmation Voucher kungakapheli izinsuku zebhizinisi ze-3
Khetha usuku lokufika lokufika nenani lomkhiqizo. Qhafaza ENGEZA EKALISHINI or INCWADI MANJE.
* Ukulethwa kokufika kosuku: Kunconywa ukuthi uchofoze ngosuku lokuhlolwa kwehhotela lakho.
* Okuphoqelekile ukugcwalisa:
asterisk futhi Imininingwane yababekhona
Indawo ikheli / Indawo yokuhlala inombolo yocingo
Ihhotela isikhathi at Amanothi woku-oda. (Uma ufisa ukuthola umkhiqizo wakho kwenye indawo ngaphandle kwehhotela lakho, sicela ubhale ikheli nenombolo yocingo yendawo yakho oyikhethile kuma-Order amanothi
Chofoza PayPal . Chofoza Qhubekela ku-PayPal. * Kukhona imali ekhomishini ye-5% Paypal.
* Ukuze ubone inqubo ye-PayPal, sicela ubheke i-'PayPal '.
Bheka i-imeyili yakho ukuthola ukuthi uyikhokhile.
Umkhiqizo wakho uzokulinda edeskini elingaphambili lehhotela noma egumbini lakho lehhotela.
Sicela ubheke i-oda lakho ngaphambi kokuqhubeka nokuthenga.
Uma usunayo i-akhawunti yakwaPaypal, sicela uqhubeke uyothenga.
Uma lesi isikhathi sakho sokuqala usebenzisa i-PayPal, futhi ungafisi ukwenza i-akhawunti ye-PayPal, sicela ulandele ngezansi.
I-1. Chofoza u-Pay nge-Debit noma i-Card Card.
I-2. Chofoza Izwe lakho.
I-3. Gcwalisa imininingwane yeKhadi lakho nekheli leNkokhiso.
I-4. Chofoza uvumelana (ibhokisi lokuhlola) bese ukhokha manje.
Kukhona imali ekhomishini ye-5% Paypal.
Bheka i-imeyili yakho ukuthola ukuthi uyikhokhile kanye nevawusha.
(Sizokuthumelela ivawutsha ngaphakathi kosuku lwebhizinisi le-1 lwezinto okufanele uzenze nangezinsuku zebhizinisi le-2 zePhakheji Tour)
I-copyright © 2018 Etourism. Wonke amalungelo agodliwe ⠀⠀ / ⠀⠀ Izithombe zitholwa yi-KTO (Korea Tourism Organisation).